Ebɛn Asɛmpa na Ɔwɔ Hɔ a Ɔfa Nyamesom Ho? | Asɛmpa
1. Aso ɔsom nyina ye?
Nyimpa a wɔwɔ akoma pa wɔ ɔsom ahorow nyina mu. Ɔyɛ asɛmpa dɛ Nyankopɔn hu nyimpa a wɔtse dɛm no nyina na ɔdwen hɔn ho. Naaso dza ɔyɛ awerɛhow nye dɛ, ewudzisɛm pii na akɔ do wɔ nyamesom dzin mu. (2 Corinthfo 4:3, 4; 11:13-15) Nsɛm ho amandzɛɛbɔ kyerɛ dɛ, ɔsom binom dze hɔn ho ahyehyɛ ewudzi mu, wɔatɔr mbusua ase, wɔayɛ mbofra ayaayaadze na wɔdze nda ho nsɛm atseetsee hɔn. Iyi ma nyimpa a wɔwɔ akoma pa na wɔwɔ Nyankopɔn mu gyedzi no dzi awerɛhow!​—Kenkan Matthew 24:3-5, 11, 12.
Nokwar som mufo hyɛ Nyankopɔn enyimnyam naaso ator som dze, wɔnnyɛ dza ɔsɔ n’enyi. Ator som kyerɛkyerɛ nsɛm a onnyi Bible no mu. Nkyerɛkyerɛ no mu bi nye nsɛm a wɔkã fa Nyankopɔn na ewufo ho a ɔnnyɛ nokwar no. Naaso Jehovah pɛ dɛ nyimpa hu no ho nokwasɛm.​—Kenkan Ezekiel 18:4; 1 Timothy 2:3-5.
2. Ebɛn asɛmpa na ɔwɔ hɔ a ɔfa nyamesom ho?
Dza ɔyɛ enyigye no, ɔsom ahorow a wɔkyerɛ dɛ wɔdɔ Nyankopɔn naaso nokwasɛm nye dɛ wɔdɔ Satan no wiadze yi no, nnkotum adaadaa Nyankopɔn. (James 4:4) Nyankopɔn n’Asɛm frɛ ator som nyina dɛ “Babylon Kɛse” no. Nna Babylon yɛ tsetse kurow a hɔ na ator som hyɛɛ ase wɔ Noah Nsuyirii no ekyir. Ɔnnkɛkyɛr, Nyankopɔn bɛsɛɛ ɔsom a wɔdaadaa na wɔhyɛ adasamba do no nyina efi hɔ prɛko pɛr.​—Kenkan Nyikyerɛ 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.
Asɛmpa pii wɔ hɔ. Jehovah no werɛ mmfiir nyimpa a wɔwɔ akoma pa a wɔapetse ator som mu wɔ wiadze nyinara mu no. Ɔrekyerɛkyerɛ hɔn nokwar no ma wɔaakã abɔ mu wɔ koryɛ mu.​—Kenkan Micah 4:2, 5.
3. Ebɛnadze na ɔsɛ dɛ nyimpa a wɔwɔ akoma pa no yɛ?
Nokwar som rekã nyimpa abɔ mu wɔ koryɛ mu
Jehovah dwen hɔn a wɔdɔ nokwar no na wɔyɛ ndzepa no ho. Ɔkã kyerɛ hɔn wɔ enyiber do dɛ womfi ator som mu. Nyimpa a wɔdɔ Nyankopɔn no wɔ ɔpɛ dɛ wɔbɛyɛ nsesã mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɔsɔ n’enyi.​—Kenkan Nyikyerɛ 18:4.
Ber a nyimpa a wɔwɔ akoma pa tsee asɛmpa no fii asomafo no nkyɛn wɔ mfeha a odzi kan no mu no, wɔdze enyigye gyee asɛm no. Jehovah asɛm a wosũae no maa wɔsesãa hɔn abrabɔ. Iyi maa wonyaa asetsena a enyigye na enyidado wɔ mu. Wɔayɛ nhwɛdo papa ama hɛn osiandɛ wɔdze Jehovah dzii kan wɔ hɔn asetsena mu ber a wotsiee asɛmpa no.​—Kenkan 1 Thessalonicafo 1:8, 9; 2:13.
Hɔn a woefi ator som mu no, Jehovah gye hɔn ba n’ebusua a no mufo yɛ n’asomfo no mu. Sɛ egye nsa a Jehovah fi enyigye mu to frɛ wo no to mu a, ebɛyɛ ne nyɛnko, ebɛba abɛkã n’ebusua a no mufo dodɔ hɔnho no ho, na ibenya onnyiewiei nkwa.​—Kenkan Mark 10:29, 30; 2 Corinthfo 6:17, 18.
4. Nyankopɔn besi dɛn dze enyigye aba asaase nyina do?
Atsɛmbu a ɔreba ator som do no yɛ asɛmpa. Nyimpa nyina bɛgye hɔnho efi nhyɛdo ase. Ator som nnkotum adaadaa na ɔaakyekyɛ nyimpa mu bio ara da. Nyimpa nyina bɔbɔ mu dze koryɛ asom nokwar Nyankopɔn kortsee no.​—Kenkan Nyikyerɛ 18:20, 21; 21:3, 4.
Si Gyinae dɛ Ebɔsom Nyankopɔn Wɔ Nokwar Mu
Sɛ erekã wo gyedzi ho asɛm akyerɛ afofor a, ebɛn nsɛndzendzen na ibia ibehyia? Ibesi dɛn akã wo gyedzi ho asɛm akyerɛ afofor a ennkɛhyɛ hɔn ebufuw?
Fa mona Fa mona Ebɛn Asɛmpa na Ɔwɔ Hɔ a Ɔfa Nyamesom Ho?